विचार « Tattatokhabar
‘सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र’ घोषणा यसै वर्षः प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । हिमालय क्षेत्रमा पर्यावरणीय अनुसन्धान गर्दै आएको अन्तरसरकारी संस्था इसिमोडका प्रमुख अर्थशास्त्री डा. मणी नेपालले मुलुकको ऊर्जा उपयोग प्रबृत्ती बदल्नुपर्ने बताएका छन् । उनले विश्वब्यापी ऊर्जा खपतको प्रबृत्तीसँग नेपालको
अरुलाई खाने बाघले मलाई बचाउला भन्ने नसोच्न बैंकरलाई गभर्नर अधिकारीको आग्रह (अन्तर्क्रियामा के भने हेर्नुहोस पुर्णपाठ)
नेपाल राष्ट्र बैंकका २२ जना कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ । विभिन्न बैंकीङ संस्थाका कर्मचारीमा पनि कोरोना देखिएको छ । कोरोनाको त्रासका बावजुत कार्यक्षेत्रमा खटिएर सेवा प्रवाह गर्नुभएकोमा बैंक वित्तियसंस्थलाई
विष्णु तारुके काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले शुक्रबार राजिनामा दिएपछि देश अर्थमन्त्री विहिन भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियसभा सदस्यबाट पदमुक्त हुनु अगावै अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई राजिनामा
प्रिय आनन्द !! तिम्रो बलिदान न मुर्दाको कथा बन्यो, न चिहानघारीको पर्यटन ?
जानुका धमला तिम्रो सहादतको सम्मान कसले गर्ने, कसको नैतिक पुँजी र अधिकार होला र अहिले ? तिम्रो बलिदान केको निम्ति थियो ? तिमी केका विरुद्ध लड्यौँ र के प्राप्त भयो
वालेट प्रडक्ट संसारमा आउटडेट हुँदै छन् : सञ्जीव सुब्बाको विचार
सञ्जीव सुब्बा काठमाडौं । नेपाली बैंकिङले अहिलेको फड्को मार्नुमा सन् १९८० को दशकमा संयुक्त लगानीमा स्थापना भएका तीन वटा बैंकहरुको महत्वपूर्ण भूमिका छ । नेपाल ग्रिनलेज बैंक, नेपाल अरब बैंक